eHimalaya Online || News from nepal » ल,कडाउनको समयमा सलमान खानको फार्म हाउसमा ज्याकलिन र सलमान यसरी रा,तभरि………!
ल,कडाउनको समयमा सलमान खानको फार्म हाउसमा ज्याकलिन र सलमान यसरी रा,तभरि………!
२०७८ मङ्सिर २९ गते बुधबार ०२:३०
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन यतिबेला आफ्ना प्रे,मी सुकेश चन्द्रशेखरलाई लिएर चर्चामा छिन् । हालै, यिनी एयरपोर्टमा प,क्राउ परेकी थिइन । बलिउडकी श्रीलंकन ​​सुन्दरी भनिने अभिनेत्री ज्याकलिन आजकाल निकै चर्चामा छिन्...
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन यतिबेला आफ्ना प्रे,मी सुकेश चन्द्रशेखरलाई लिएर चर्चामा छिन् । हालै, यिनी एयरपोर्टमा प,क्राउ परेकी थिइन ।
बलिउडकी श्रीलंकन ​​सुन्दरी भनिने अभिनेत्री ज्याकलिन आजकाल निकै चर्चामा छिन् । बलिउडकी ‘चि,तियाँ कलैया गर्ल’ अर्थात ज्याकलिन फर्नान्डिज आफ्नो सुन्दरताका लागि निकै चर्चित छिन् । उनले लामो समयदेखि चलचित्रबाट टाढा रहेपनि उनी पहिले जस्तै चलचित्रलाई मन पराउँछिन । ज्याकलिन आजकल फेरि एकपटक हे,डलाइनमा छिन्,।
ज्याकलिन फर्नान्डिजले बलिउडमा आएर ठूला सुपरस्टारसँग काम गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । फिल्म उद्योगमा काम गर्दा ज्याकलिनको नाम धेरै कलाकारसँग जोडिएको थियो । जसमध्ये एक हुन् सुपरस्टार सलमान खान ।
ज्याकलिनको नाम लामो समयदेखि सुपरस्टार सलमान खानसँग जोडिएको छ । सलमान र ज्याकलिनले २०१४ मा फिल्म कि,कमा सँगै काम गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै उनीहरुको अ,फेयरको खबर हे,डलाइनमा रह्यो । ज्याकलिन फर्नान्डिज हरेक दिन सलमान खानसँग भेटिन्थिन। ज्याकलिनले प्रायः सलमानसँगको आफ्नो प्रे,मले भ,रिएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्थिन । ल,कडाउन को समयमा सलमान खानको फार्म हाउसमा धेरै दिन र धेरै रा,त सलमान खानसँगै ब,सेपछि चर्चामा आएकी यी बलिउड अभिनेत्री ! यस क्रममा ज्याकलिनका धेरै तस्विर र भिडियो भाइरल भएका थिए । त्यतिबेला फार्म हाउसमा ज्याकलिन र सलमान खान बाहेक कोही थिएनन्, दुबैले धेरै समय सँ,गै बि,ताएका थिए ! कतिपयले ज्याकलिनलाई गा,ली गरे !मानिसहरूले भने सलमान खानले पनि ज्याकलिनलाई छो,ड्ने छै,नन्।
यसअघि पनि ज्याकलिनको नाम धेरै निर्देशक र कलाकारसँग जोडिएको थियो । वास्तवमा ज्याकलिनले बलिउडमा डेब्यु गर्दा उनको नाम अभिनेता रितेश देशमुखसँग जोडिएको थियो । ज्याकलिनले बलिउडमा फिल्म अ,लादिनबाट डेब्यु गरेकी थिइन्, जसमा रितेश देशमुख पनि थिए। सुटिङका ​​क्रममा ज्याकलिन रितेशसँग प्रे,ममा परेकी थिइन् । तर त्यतिबेला रितेश जेनेलियासँग डे,ट गरिरहेका थिए त्यसैले उनले ज्याकलिनलाई ध्या,न दिएनन् ।
प्रकाशित मिति २०७८ मङ्सिर २९ गते बुधबार ०२:३०